WTC Final : भारतीय टिमले सुरु गर्‍यो प्रशिक्षण (भिडियोसहित) » Onlycricnepal
WTC Final : भारतीय टिमले सुरु गर्‍यो प्रशिक्षण (भिडियोसहित)
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १२:१७
काठमाडौंः भारतीय क्रिकेट टिमले आईसीसी वर्ल्ड टेष्ट च्याम्पियनशिप फाइनलका लागि अभ्यास गर्न थालेको छ। केही दिनअघि इंग्ल्याण्ड पुगेको टोलीले त्यहाँ क्वारेन्टाइन पूरा गरेपछि अभ्यास सुरु गरेको हो।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ले टिमको पहिलो अभ्यास सिजनको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। भिडियोमा सबै खेलाडीहरू गहन रूपमा अभ्यास गरिरहेका छन्।
भिडियो सार्वजनिक गर्दै बीसीसीआईले लेखेको छ, ‘हाम्रो पहिलो टिम अभ्यास सत्र सुरु भएको छ। यस समयमा यहाँ अधिक उत्सुकता छ। भारतको तयारी विश्व टेष्ट च्याम्पियनशिप फाइनलका लागि हो।’
बीसीसीआईले अपलोड गरेको भिडियोमा पहिले ग्राउन्ड र ड्युक्सको रातो बल देखाइएको छ। त्यसपछि भारतीय टिमका सबै खेलाडीहरूले गरिरहेको अभ्यास देखाइएको छ।
रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे र चेतेश्वर पुजारा सबैले ब्याटिङ अभ्यास गरे। त्यसपश्चात जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इशान्त शर्मा र मोहम्मद शामी पनि फास्ट बलिङ गरिरहेका देखिन्थे। प्रशिक्षक रवि शास्त्रीको आँखा यी सबैमा थियो।
भारती टिमका अफस्पिनर रविचन्द्र अश्विन बलिङ र अलराउन्डर रवीन्द्र जडेजाले ब्याटिङमा अभ्यास गरे। विकेटकीपर–ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्तले अभ्यासको क्रममा धेरै ठूलाठूला शट खेलेका छन्। जसका लागि उनी चिनिन्छन् पनि।
बुमराहले विराट कोहलीलाई बलिङ गरेको पनि भिडियोमा देखाइएको छ। फिल्डिमा रोहित शर्मा, शुभमन गिल र मयंक अग्रवाल स्लिप कर्डनमा थिए।
अभ्यास सत्रका दौरान भारतीय टिमले कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी सबै नियम र निर्देशनहरू पालना गरेको छ। अभ्यास सत्रमा विराट कोहली र अन्य खेलाडीले मास्क लगाएका थिए। आईसीसी वर्ल्ड टेष्ट म्याम्पियनशिपको फाइनल खेल १८ जुनदेखि भारत र न्युजिल्याण्डबीच हुनेछ।
न्यूजिल्याण्ड विरुद्धको टेष्ट सिरिज पनि अष्ट्रेलियाद्वारा ‘क्लिन स्विप’
२१ पुष २०७६, सोमबार ०७:३५
टेष्ट क्रिकेटमा कप्तान कोहलीले बनाए खराब कीर्तिमान!
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०४:४३
WTC Final : अम्पायरका कारण उपाधि चुम्न वञ्चित हुनसक्छ भारत !
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १८:४२
कप्तान कोहलीमाथि लाग्न सक्छ प्रतिबन्ध, यस्तो छ कारण
५ फाल्गुन २०७७, बुधबार १३:५०